Ugboro abụọ ọnụọgụ weere ekpochapụ kaadị Asset Market - Blockchain News
The cryptocurrency ahịa bụ a oké osimiri nke red taa, na niile n'elu 10 cryptocurrencies site ahịa okpu akuko abụọ-ọbula pasent weere nke ikpeazụ 24 awa.
Bitcoin emewo ama esịn 16 % N'ime otu oge na 10-izu lows n'okpuru $8,000 na ike na-ata ahụhụ ya kasị njọ-enwe kwa izu na ọnwụ (karịrị 25 %) ebe April 2013. The cryptocurrency ahụhụ a 30-percent dobe na January na bụ ala 45 % na a afọ na-ụbọchị ndabere.
Ethereum si ether iriba bụ ala site 28 %. The cryptocurrency lere anya dịtụ resilient mbụ n'izu a, kọrọ n'ihi institutional isi obodo aga na Venezuela na mkpebi presale Petro cryptocurrency na ethereum n'elu ikpo okwu. Otú ọ dị, ehi adịgide anya ka ha ebelatawo na ETH e ikpeazụ hụrụ erekwa gburugburu $785.
Ka ọ dịgodị, Ripple si XRP iriba kwubara atọ na ndepụta nke losers na a 35 percent dobe. The cryptocurrency ugbu a daworo $0.635 - ya kasị ala ozo kemgbe Dec. 15. Na-eso XRP ọjọọ mmalite nke afọ, na a 49 percent ọdịda n'oge January.
n'ozuzu, ngụkọta ahịa capitalization nke niile cryptocurrencies ẹka ọnụ emewo ama esịn karịa $100 ijeri.
N'ihu ala chaatị, egbu a obere ụtọ n'ime ọchịchịrị na mbibi na-, a gold-kụziri iriba aha ya bụ DigixDAO (DGD) guzo mgbe ọ gwa 30 percent uru.
Ịkwụ Ụgwọ ọrụ straipu jụ Bitcoin
Ịkwụ Ụgwọ Processor St ...
Canadian kaadị mgbanwe Coinsquare ewelite $ 30M
Canadian cryptocurre ...
Previous Post:Blockchain Observatory na Forum-eweta EU na "ebute ụzọ" nke Blockchain Tech
Next Post:Canada mbụ Blockchain ETF mma site regulators